နိုင်ငံတကာ, 18 ဧပြီ 2018
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ဝေဖန်ခံရလို့ Starbucks ၀န်ထမ်းတွေကို သင်တန်းပေးမည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာရော ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာပါ ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အမေရိကန်ကော်ဖီဆိုင် လုပ်ငန်း Starbucks ကုမ္ပဏီဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆိုင်ပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ကို မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ပိတ်ထားဖို့ရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတကတော်ဟောင်း Barbara Pierce Bush (၉၂ နှစ်) ကွယ်လွန်
အမေရိကန် သမ္မတကတော်ဟောင်းလည်းဖြစ် မိသားစုဆိုင်ရာပညာရေးကို တစိုက်မတ်မတ် ထောက်ခံ အားပေးလာသူဖြစ်တဲ့ Barbara Pierce Bush ဟာ ၂၀၁၈ ဧပြီလ ၁၇ ရက် အင်္ဂါနေ့ အသက် ၉၂ နှစ်အရွယ်မှာ Texas ပြည်နယ် Houston မြို့ကနေအိမ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ် အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ် သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သူ Barbara Bush မှာ သားသမီး ၅ ဦး၊ မြေး ၁၇ ဦးနဲ့ မြစ် ၇ ဦးတို့ ကျန်ရစ်ကြောင်း သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ရုံးက အင်္ဂါနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Trump နဲ့ Abe မြောက်ကိုရီးယား အရေး အဓိကဆွေးနွေး
ကိုရီးယား ၂ နိုင်ငံကြားမှာ တရားဝင်စစ်ပြေငြိမ်းမှု မရှိသေးတဲ့ကိစ္စကို သမ္မတ Trump ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Shinzo Abe နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာထောက်ပြပြီး စစ်ပြေငြိမ်းဖို့သူသဘောတူကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။